Plaxo Alpha Kutarisa | Martech Zone
Plaxo Alpha Kutarisa
Monday, May 28, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndanga ndiri fan hombe ye Plaxo kubvira pandakazviona kekutanga. Ini ndinochengeta mabhuku ekero pamhepo uye isingaenderane munzvimbo dzinosvika gumi nemaviri, kusanganisira nharembozha yangu. Mukuwedzera ini ndine iyo LinkedIn account. Kuramba uri pamusoro pazvo zvese zvinotyisa… dai zvisiri zvaPlaxo.
Fungidzira kana munhu wese waunoziva akachengeta kero yavo kero mubhuku rako rekero saka hauna kumbobata ... iyo Plaxo! Iwe 'unonyorera' kune vako vaunosangana navo 'basa kana ruzivo rwepamusha paPlaxo uye pese paunoyananisa mabhuku ako ekero, Plaxo anotarisira zvimwe zvese. Iko kune kunyange akangwara kwazvo de-duper iyo inosanganisa ruzivo kubva kune maviri kana akawanda makadhi uye inokutendera iwe kuti uone kusangana uye kuibvumira.
Ini ndakapinda muPlaxo masikati ano ndikawana kushamisika kunoshamisa - kumusoro nekupinda kwaive kukoka kuPlaxo Preview. Pandakaibaya, ndakaunzwa mune yakanaka itsva peji yePlaxo yekumba - inosanganisira bhuku rekero, karenda, zvese zvandinobvumirana uye kunyange zvimwe zvinhu zvitsva, senge browser-based Instant Meseji kubva kuMeebo, ecards, mabasa, manotsi, mamiriro ekunze, mamepu ne Yahoo! uye kunyange Dzvanya Kudana Inzwi pamusoro peIP naJajah!
Kune chero munhu anonamatira zvakanyanya seni zvandinoita, chishandiso ichi chinofanirwa kuve nacho! Ini ndinogona kunyange kuiwana kuburikidza nharembozha-browser ine inoshamisa yakaonda interface iyo inokurumidza uye nyore kushandisa.
May 28, 2007 pa 8: 41 PM
Yep! Ndinongozvida 🙂
May 29, 2007 pa 4: 39 AM
Iwe unoshandisa iyo premium sevhisi? Zvimwe zvezvinhu zveprimiyamu zvinosanganisirwa senge 'contact de-duper' ndizvo zvinhu zvinofanirwa kunge zviri muyakajairwa sevhisi, asi ini ndinogona kunzwisisa bhizinesi kesi nei isiri. Asi ini ndinoda zano rekubatanidza neangu LinkedIn profile.
Uye kuwanika nharembozha zvakare kungave kubatsirwa kukuru, kunyange ini ndanga ndichitoshandisa iSync paMac yangu kuyananisa bhuku rekero neN95 yangu. Asi zvaizorerutsa zvinhu kuti zvese zviuye kubva kune imwechete sosi.
May 29, 2007 pa 7: 52 AM
Ehe, ini ndinobhadhara iyo yekutanga sevhisi. Iyo nyowani sync inoenderana neako Mac Kero bhuku uye iCal! Iyo de-duper inofanirwa kuve nayo, ndinobvuma.
May 29, 2007 pa 11: 47 AM
Okay Doug, ndanwa iyo Kool-rubatsiro uye kurodha pasi turu yekushandisa yeAptlook. Ndine chokwadi chekuti izvi ndizvo zvandanga ndichitsvaga. Zvakanaka!
May 29, 2007 pa 7: 43 PM
Hauzonyadziswa, Tony! Ini handina kukutungamira mukutsauka pakubata, handiti? 🙂
May 30, 2007 pa 11: 06 AM
Jun 14, 2007 pa 9: 39 PM
Iwe unofanirwa kuongorora isipi.com. Ndakafambisa ese mahwanda angu epaxo ku isipi.com. Icho chinhu chinotonhorera chose. Ndicho icho plaxo yaifanira kuve yaive.
Jun 14, 2007 pa 10: 38 PM
Ini ndakanyorera kukokwa kuna Spock, asi ini handioni kuti ingarova sei Plaxo! Ini ndichaipa mhepo, kunyange!